मंगलवार २६५४.६९ विन्दुमा नेप्से परिसूचक, ६ अर्ब बढीको कारोबारमा एनसीसी बैंकको सर्वाधिक हिस्सा - Aarthiknews
मंगलवार २६५४.६९ विन्दुमा नेप्से परिसूचक, ६ अर्ब बढीको कारोबारमा एनसीसी बैंकको सर्वाधिक हिस्सा
काठमाडौं । मंगलवार नेप्से परिसूचक २ हजार ६५४ दशमलव ६९ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । यो दिन नेप्से परिसूचक १ दशमलव ९४ अंक माथी उक्लिएको हो । उता, सेन्सेटिभ इन्डेक्स भने शून्य दशमलव ३२ अंक बढेर ४७५ दशमलव ४४ विन्दुमा पुगेको छ ।
२ हजार ६५२ दशमलव २७ विन्दुदेखि खुलेको मंगलवारको बजार २ हजार ६६३ विन्दुसम्म पुगेको थियो भने २ हजार ६४० विन्दुसम्म झरेको थियो । अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा नेप्से परिसूचक सामान्य अंकले बढेपनि कारोबार रकम भने कम भएको छ ।
सोमवार रू. ७ अर्ब ५२ करोड ९२ लाख ९० हजार बराबरको १ करोड ५९ लाख ८ हजार ४९९ कित्ता शेयर कारोबार भएकोमा मंगलवार रू. ६ अर्ब ५ करोड २२ लाख ३६ हजार बराबरको १ करोड ३० लाख १५ हजार १८३ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ । यो दिन कुल कारोबारमा सर्वाधिक हिस्सा एनसीसी बैंकले ओगटेको छ । एनसीसी बैंकको मंगलवार रू. २३ करोड ९ लाख ६४ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो ।